Jaamacadda SIMAD ayaa Xarunta Dhexe ku qabatay bandhig loogu magac daray Maktabadda Buugta-nool“Human Library”. – Goobjoog News
Jaamacadda SIMAD ayaa Xarunta Dhexe ku qabatay bandhig loogu magac daray Maktabadda Buugta-nool“Human Library”.
Bandhigaan oo ahaa kii ugu horeeyay ee abid lagu qabto Geeska Afrika ayaa waxaa kasoo qeyb galay Madaxda ugu sareeysa jaamacada SIMAD, arday fara badan oo ka kala socotay Jaamacaddaha dalka, macalimiin iyo marti kale oo dhamaantood qeyb ka ahaa bandhiga.
Human library waa bandhig loogu talo galay in akhristayaashu la kulmaan dad halkii ay ka aqrisan jireen buugaagta daabacan taas oo loola jeedo in dadku ay yihiin buugag-nool .
“Buugtan-nool waa dad goob joog usoo ahaa amaba ayaga naf ahaantooda la kulmay tacadiyo bulsheed badan oo ku qotama Quursi, eex, qof jecleysi amaba takoor iyo xaalado lamida oo kala gedisan kuwaas oo dhamaantood aan la xirririn qofka wax tarkiisa dhabta ah. Buugaagtan nool waxay marka la wadaagaan akristayaasha wixi ay ka barteen dhacdooyinkaas iyo sida looga gudbi karo”, Sidaas waxa yiri Ustaad Maxamuud maxamed siyaad oo ah Madaxa Maktabadda Jaamacadda SIMAD- Dhoobaale
Dadkan loo bixiyay buugaagta nool ee lagu marti qaaday in ay ardayyda ama akhristayaasha la hadlaan ayaa ka kala ahaa:
Usoo jooge ku xeel dheer sooyaalkii siyaasadda soomaaliya lagasoo bilaabo
60-dammaadkii xiliyadii gumeysi ladirirka iyo xornimo doonka.
dowladihii dalka soomaray sida: Dowladihii daakhiliga, rayidka militeriga iyo af-gambiyadii dhacay
Bare aan xubnaha araga qadar ALLE ku dhalan heystana darajada Masterka ama heerka 2aad ee jaamcadeed. Haddana ah barre jaamacaddaha dalka wax ka dhiga
Bare kamida barayaasha jaamacadda oo ka hadlaya sidii uu kusoo islaamay
Nolosha dalka dibaddiisa gaar ahaan dadalka ku bahoobay Yurub.(isbedelka dhaqanka iyo laqabsigooda)
Bare aan wadanka u dhalan (Maladii shalay iyo xaalka hadda)
Dibadjoogto mudooyin badan ka maqaneyd dalka oo soo laabatay. (layaabkeedii hab dhaqameedka iyo sidii ay ula qabsatay)
Hal-abuur shaqo baahday oo guuleysatay iintii bur-burka dalku jiray
Dhammaan ardaydii ama akhristeyaashii loo qabtay bandhigan ayaa ku tilmaamay mid aad u muhiim ah oo aad loogu baahnaa bulshadana u horseedi kara isfaham iyo is ixtiraamid farqiyada iyo kala duwanaashaha dhexdooda ah.
Faaiidooyinka bulshadu ka baran karo bandhigan ayaa ah in dhacdooyinka caalamka ka dhaca ee faaiidada u leh bulshada la suura galin karo in ay ka dhacaan dalka si caalamka u arko dhinacyada wanaagsan ee ay bulshadeynu ku talaabsaneyso sidaa waxa yiri Madaxa maktabadda jaamacada SIMAD, ustaad siyaad asigoo sidoo kalenena ku daray In akhriteyaashu ay fursad u heli karaan isla markaasna la kulmaan dad qibrad u leh dhacdooyin badan oo bulshada dib u dhigay kana gudbay taas oo ugu danbeyn horseedi karta isbedel bulshadu ka sameyso kagana gudubto kala qob qobnaata is liidida aan la xiriirn kartida qofka iyo wax galkiisa dhabta ah.
Sidoo kale dadkii waayo aragnimada lawadaagayay ardayda ayaa ayana dhankooda cadeeyay in ay ku faraxsanyihiin in ay ardayda uga jawaabeen dhamaan su’aalihii ku qotomay malooyinkii ay ka heyteen fikradiihii ay lawadaageen.
Firkradan ayaa asalkeeda ka timid dhalinyaro kasoo jeeda dalka Denmark taas oo hadda ku faaftay dalal badan oo qaaradaha aduunka ah.
Sanbaloolshe: Dowladda Hal Milyan Ayeey Ku Bixisay In Doorashada La Iiga Adkaado (Dhageyso)
Khasaare Ka Dhashay Dagaal Maanta Ka Dhacay Degmada Kaaraan Ee Muqdisho
Somaliland: Maxkamadda Sare Oo Dhaarisay 31 Wasiir
Guddiyada Aqalka Sare Oo Soo Bandhigay Qorshe Howleedkooda